Eminyakeni eyishumi edlule, komnikazi Dombay e Karachay-Cherkess Republic isibe omunye ethandwa kakhulu Russian ski resort nge ingqalasizinda evuthiwe. Snowy iziqongo entabeni, emifuleni asheshe nge izimpophoma ezinamandla, ezinhle alpine amachibi asezintabeni, amahlathi amahle * nomthidari, Ezimfundeni eziphakeme, okumsulwa wasentabeni - konke lokhu Dombai. Kanjani ukusuka eMoscow? Lo mbuzo ivamise ukucelwa in the yelucwaningo, abasebenzisi Inthanethi. Cabangela izindlela ezahlukene ukuze uthole Dombay ngakho ngaphambi kokuthatha uhambo, ungakhetha inketho ukhululekile kakhulu, futhi nokulahlekelwa isikhathi ukwenza okungenani.
Izici uhambo kusuka eMoscow kuya Dombai
Iqoqa e Dombay, okokuqala kunakho konke, sicela uqaphele ukuthi resort kungekho sezindiza noma isitimela esiteshini, ngakho ukufakelwa is ngenakugwemeka. Abanye indlela kuyodingeka ukunqoba ngebhasi noma imoto. sizokwazi ngezindlela eziningana zivela emizini enkulu North eCaucasus esifundeni, lapho izofika ngendiza noma ukuqeqesha ukuze uthole Dombai.
amabhasi avamile ukusebenzisa njalo phakathi laseStavropol Territory emadolobheni futhi Karachay-Cherkessia. Cishe, uzoba ukwenza omunye ukufakelwa e Cherkessk noma Teberda. Gwema nemibi ukuhamba kwezithuthi zomphakathi kuzovumela itekisi ezingasetshenziswa kufanele zibhalise kusengaphambili usebenzisa izici ekhethekile ingosi.
Abanikazi Iningi amahhotela yangasese namahhotela e Dombay ngokufaneleyo nangohlelo nihlela isevisi Shuttle kusuka esikhumulweni sezindiza noma isitimela esiteshini. Qasha imoto (noma ekuqaleni ukuya emotweni yakhe) - option best for labo uhlela ukuvakashela hhayi kuphela e Dombai, kodwa futhi ukuvakashela nakwezinye izindawo ezithakazelisayo of the North eCaucasus.
Kanjani ukuze uthole Dombay kusuka eMoscow ngendiza
Le ndiza - esheshayo, indlela kodwa futhi eqolo ukuhamba. Kusukela enhloko-dolobha kuya Dombai eliseduze Mineralnye Vody Airport ingandiza nganoma isiphi isikhathi sosuku kusukela Sheremetyevo, Domodedovo futhi Vnukovo zezindiza kanye izindiza ngqo of izindiza ezahlukene. Cishe emahoreni amabili ngemva Ukuhamba usuvele izofika kuya zezindiza ngobukhulu eCaucasus. Alternative - ukundiza kusuka eMoscow kuya laseStavropol.
Indlela okuthuthukile sezindiza Dombai ungenza inkampani izivakashi ibhasi "Gulliver", okuyinto kule sizini Ukushushuluza kusukela ngoDisemba kuya ku-March, ugijima nsuku zonke. isikhathi Ukuhamba ibhasi kangcono acaciswa kusengaphambili. Ngezinye izikhathi, lokho kungase kube esafinyelelwa Shuttle Ibhasi sebhasi Minvod futhi unqobe lonke indlela resort ngebhasi nge ushintsho Teberda. Abathandi isivinini nenduduzo ungathanda ukuqhubeka umzila kusuka esikhumulweni sezindiza ngeteksi, futhi okungenani ukuza Dombay amahora amane - yokungcebeleka ski!
Kanjani ukusuka eMoscow ngesitimela
Iya Dombay ngesitimela - a akubizi futhi kuba siyindlela elula. EKursk, Kazan bese Paveletskaya iziteshi yenhloko-dolobha i-izitimela ukuba Mineralnye Vody futhi Kislovodsk Nevinnomyssk. Emgwaqweni kuyodingeka ichithe ama amahora 28-38.
Izinketho ukunyakaza eminye kuncike ekutheni yiziphi zezitimela uzofika. Kusukela esiteshini, Mineralnye Vody izindlela ukuze uthole Dombai ziyefana kusuka esikhumulweni sezindiza.
Kusukela Kislovodsk kungenzeka njalo ukuya ngebhasi Teberda, bese ukuthatha itekisi endaweni. Ungakhombisa futhi ukuthatha ithuba ukuhamba indawo ibhasi Kislovodsk travel ejensi ukuthi ahlele ilanga izinkambo Dombai.
Naphezu kweqiniso lokuthi Nevinnomyssk kusukela ujantshi iziteshi esiseduzane Dombai, ukufinyelela ngqo akunakwenzeka kusuka kuye endaweni. Kufanele uthole ibhasi noma isitimela ukuba Cherkessk, bese taxi ukuze resort.
Kanjani ukuze uthole kusuka eMoscow kuya Dombai ibhasi
Kukhona enye indlela yokuthola e Dombay. Kanjani ukusuka eMoscow? Kunokunye ongakwenza - ibhasi. Inani amafemu ahlele izindiza ngqo kusuka eMoscow kuya Dombay ku ukhululekile futhi yesimanje amabhasi okunethezeka ifakwe konke ababekudinga ukuze uhambo emnandi. Bafaka Composting zangasese, amathelevishini audiovideosistemy boilers. Lona eshibhe (ngaphandle thro) inketho, kahle kulabo abangekho ezisheshayo kakhulu.
Nokho, lezi amabhasi ukwenza nsuku zonke noma masonto onke izindiza kuphela ski sonyaka, ngakho abafuna aphumule Dombai ngezinye izikhathi zonyaka kuyodingeka uthole ezinye izindlela zokuya.
Dombay: indlela ukusuka eMoscow ngemoto
Izikhangibavakashi Dombay siqu imoto - kukho isabelomali nefinyelela eziningi. Lolu khetho udonsa ekubusweni ezokuthutha izimiso, ukuntuleka ukuxhumana futhi ithuba elihle kakhulu ujabulele ukubukwa obumangalisayo-panoramic of eCaucasus. Ungayeka noma kunini uma ufuna.
Uma unquma ukuhamba kusuka eMoscow kuya Dombay ngemoto, uyoba yini emfushane endleleni ubude mayelana 1,600 km. onguthelawayeka Federal M4 "Don" sidlula Voronezh futhi Rostov-on-Don. Ngemva Nevinnomysska kuyodingeka baphendukele Cherkessk ke ukushayela Karachaevsk futhi Teberda. Umgwaqo kuzothatha esingaphezu kosuku.
Khetha ukhetho ukuthi kufanelekile wena uqobo, futhi ukuhamba ubumnandi. Wozani Dombay! Kanjani ukuze uthole ezivela eMoscow, siye sazama ukutshela ngemininingwane yakhona.
Ukuhamba ngesitimela "Moscow-Paris" - kukho okuhle!
Metro "Frunze": incazelo yomlando kanye
Aphumule ePrimorskiy Kray phezu kolwandle - alternative njengabakufanelekele ukuhlaziswa emabhishi eningizimu yeRussia
Lapho ulwandle ashisayo ngoJanuwari? I ezishisayo yezwe ngoJanuwari
Indlela zivuleka a esiswini cindezela neminye? Amathiphu abesilisa nabesifazane
Kwenzekani uma ungenawo ukuxubha amazinyo akho? ihora wamazinyo
Mint ngoba amadoda
Okuphakelayo "Uphelele Fit" (Perfect Fit): incazelo kanye nokubuyekeza Izazi
"Havana Club" rum: incazelo, umkhiqizo ukubuyekezwa. Havana Club